यिनै हुन् डा. केसीको अनशनबिरुद्ध अनशन बस्ने युवा – Daunne News
यिनै हुन् डा. केसीको अनशनबिरुद्ध अनशन बस्ने युवा
इलाम/ओखलढुङ्गा — आफूसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पुस २५ मा प्रा.डा. गोविन्द केसीले इलाममा १६ औँ अनशन सुरु गरे । त्यसको तेस्रो दिन फरक माग लिएर विजय थापाले पनि अनशन सुरु गरे । ‘नि:शुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारका निम्ति संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ नाम दिएर बसेको अनशनका क्रममा निकालिएको विज्ञप्तिमा थापालाई ‘सामाजिक अभियन्ता एवं विद्यार्थी’ भनेर चिनाइएको छ ।
पुस २७ गते इलाम चोक बजारस्थित लाँकुरी चौतारामा उनी अनशन बसेका थिए । संसदीय समितिमार्फत पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक कार्यान्वयन गर्नेसहित नौ बुँदे माग राखेर थापाले अनशन थालेका हुन् । थापाले अनशन थाल्दा माग पूरा नहुन्जेल आफ्नो आन्दोलन जारी हुने बताएका थिए । राजधानीबाहिर निजी मेडिकल कलेज खोल्न पाउनुपर्नेलगायत उनका माग छन् ।
उनका मागमा एमडी तथा पीजी कक्षाको कोटा कम्तीमा १ हजार ५ सय पुर्‍याउनुपर्ने, सरकारी तलब खाएर राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्नेलगायत छन् । त्यस्तै प्लस टु माथिको उच्च शिक्षा नेपालमै नि:शुल्क अध्ययन गर्ने वातावरण बनाई शिक्षा र स्वास्थ्य अध्ययनका नाममा बर्सेनि ७० अर्ब रुपैयाँ बिदेसिने गरेकाले यसलाई रोक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, बङ्गलादेशबाट फर्कने क्रममा जहाज दुर्घटनामा निधन भएका १८ डाक्टरका परिवारलाई तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई निरुत्साहित गर्न दोषीलाई फाँसीको सजाय व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन् ।
अनशन सुरु हुनुअघि जारी विज्ञप्तिमा गत वर्षको वैशाख १३ देखि काठमाडौँको खुलामञ्चमा थापाले ५३ दिन सत्याग्रह गरेको उल्लेख छ । डा. केसीका पक्षमा बजारमा दिनहुँ प्रदर्शन हुँदा थापाका समर्थकले पनि प्रदर्शन गरे । प्रदर्शनका क्रममा भएको कोणसभामा नेकपा सम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुका स्थानीय नेताले थापाका माग जायज भएको भन्दै मन्तव्य दिएका थिए ।
केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि हेलिप्टरबाट बिहीबार राति काठमाडौँ लगिएको थियो । इलामबाट उनलाई एम्बुलेन्समा झापाको भद्रपुर लगिएको थियो । त्यसको आधा घण्टामा थापालाई पनि एम्बुलेन्सबाटै झापा लगियो । थापालाई झापाबाट शुक्रवार हेलिकप्टरबाटै काठमाडौँ लगिएको थियो । दुवैको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ । अनशन पनि नारी छ ।
को हुन विजय थापा ?
डा. केसीविरुद्ध अनशन बसेर चर्चामा आएका विजयको पुरानो ठेगाना सुनकोशी गाउँपालिका ३, ओखलढुङ्गाको सिस्नेरीस्थित डाँडागाउँ हो । तेजबहादुर थापाका जेठा छोरा विजय डाँडागाउँमै जन्मिएका हुन् । उनका बुबा नेपाली सेनाका पूर्वजमदार हुन् ।
उनीहरू २०५८ सालतिर उदयपुरको कटारी बसाइँ सरे । विजयले एसएलसीसम्म कटारीमै अध्ययन गरे । स्कुले जीवनमै विभिन्न समूह बनाएर विद्यालयमा आन्दोलन गरेपछि उनी सानै उमेरमा कटारी क्षेत्रमा परिचित थिए । पछि चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीमा आबद्ध भए । चुरे भावरमा आबद्ध हुँदासमेत उनी विभिन्न घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो ।
उनको परिवार कटारी बजारको घर बेचेर काठमाडौँ बसाइँ सरेपछि तराई केन्द्रित भए । जनकपुर, सर्लाही, सप्तरी, सिराहा र सिन्धुलीसम्म विभिन्न गतिविधि गरिरहने उनी हाल ‘रैथाने एकता परिषद्’ का संयोजक हुन् । तराईका रैथाने समुदायलाई छुट्टै किसिमको पहिचानको मुद्दा स्थापना गर्ने भन्दै गठित एकता परिषद्ले राजनीतिक दलकै जस्तो गतिविधि गर्दै आएको छ । उनी मिसन सिन्धुलीगढी राष्ट्रिय मोर्चामा समेत आबद्ध थिए ।
उनका समर्थक धेरैजसो युवा छन् । आफूले गतिविधि गरेका क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्ने क्षमता भएका उनको समर्थनमा उदयपुरदेखि तराईका विभिन्न जिल्लाका दर्जनौँ युवा इलाम पुगेका थिए ।